Isikhunta - i ezithathelwanayo esehlaselwa isifo sesikhumba esenyanyekayo, ubheke impikiswano, okuvame kakhulu izindawo eziminyene (zokugeza, ama-sauna, amachibi uyabhukuda). Ukuthola ukuba isikhumba enempilo, ukutheleleka okudlulela ngokushesha, okubangela ukulunywa futhi ububomvu. Ngokuhamba kwesikhathi, isikhumba phakathi kwezinzwane imifantu kanye peels off. Indawo esilandelayo ekubhujisweni izinzipho. Ngaphansi kwethonya ukhunta, bayashintsha umbala, aphume eliyisicaba, noma, kunalokho, baba aminyene futhi okuxekethile. Uma izimpawu zishaywa indiva, futhi isikhathi asisebenzi imithi noma amakhambi abantu ekwelapheni unyawo fungal, ungalahlekelwa ipuleti nail ngokuphelele, nokuhamba uzoqala ukuletha ubuhlungu. Phezu ukuthola izimpawu zokuqala ukhunta, kutuswa ukuba athobele imithetho kwenhlanzeko, ukuze lesi sifo akusho lasakazekela amalungu omndeni, futhi isikhungo enwetshiwe liyetshaya isikhumba enempilo.
Isikhathi kanye nempumelelo ekwelapheni lesi sifo kuxhomeke ezingeni esiphakamisa umonakalo kanye indlela ekhethiwe yokwelashwa. Ngokungangabazeki, umuthi ngaphezulu, kodwa ngokuvamile yokugcoba unezithako ukuthi baxabane nomzimba. Ezimweni ezinjalo, impatho izindlela ezivamile iyona kuphela indlela yokuphuma. Kufanele kube esibanzi: zokugeza yokugcoba kanye amavithamini namaminerali, ukuthuthukisa ngcono ukungatheleleki. Kodwa ngisho nazo zonke imithetho, ukuphathwa kungenzeka isikhathi eside.
Kombucha odumile njengoba izindlela ngobuqotho nangokuzikhandla yokulwa ukhunta. Inkambo yokwelashwa nge incike ngezinga yokulimala futhi luthatha izinsuku kusuka 3 kuya ku-10. Kombucha ipuleti sisetshenziswa kusayithi elinegciwane, ivikelwe nge ngebhandeshi wembatha amasokisi. Emini, amakhowe ukushintsha 3-4 izikhathi futhi qiniseka ukushiya ebusuku futhi ekuseni isikhumba kahle hashaza ngamanzi afudumele, susa izindawo efile kwesikhumba futhi ngezipikili cuticles iodine. amakhambi Folk ngonyawo ukwelashwa ukhunta zilula futhi kahle. Kungokufanayo kunjalo Kombucha: inqubo akubangi ngokungalungile, le ndlela kuyinto hypoallergenic, etholakalayo futhi ngokushesha kuletha imiphumela.
Garlic kanye anyanisi - kungcono ezishibhile, kodwa eziphumelelayo futhi kungase kutholakale zokwelapha ezivamile futhi unyawo ukhunta on izinzipho. Zisetshenziswa ngezindlela ezahlukene. Omunye khetho - a slurry ukulungiselela eyohlobo, okuyinto ixutshwe ibhotela (zonke izithako ezintathu zithathwa ngezabelo alinganayo). Le nhlanganisela lasetshenziswa endaweni ungqimba elincanyana ezindaweni ezithintekile ukugula kwesikhumba nezinzipho izikhathi eziningana ngosuku. Le ndlela kungenziwa alternated nabanye. inketho Okwesibili - a garlic nosawoti incumbe. Ukulungiselela prostt kuhle: eyodwa isipuni sikasawoti ezivamile buhlanjululwe esincane amanzi abilayo futhi engeza nesweli oqoshiwe. Lokhu Ukwakheka icutshungulwe izindawo onegciwane (izinzipho, izinyawo, phakathi kwezinzwane), izikhathi 2 ngosuku baze zinyamalale zonke izimpawu (ububomvu, ukulunywa, njll).
Okuhle, kodwa ibanga elide ukwelapha isikhumba kanye nokwelashwa nail birch yomsizi netiyela. Lokhu ekwakhiweni is edayiswa Pharmacy, ayiqukethe yizici zamakhemikhali namakha. Excellent ejenti amagciwane linjengamafutha tea tree. Ubizwa kufanele ngokuthi i-antibiotic engokwemvelo. Ngokusho impahla yayo, it iholwa elwa namagciwane amakhambi abantu ekwelapheni unyawo fungal, izinzipho, izingalo, in the imbilapho kanye endaweni underarm. Ngaphezu kwalokho, isetshenziswa njenge-agent prophylactic, ivikela isikhumba ngesikhathi ukugeza isizini, lapho ehambele umhlangano okugeza noma sauna.
Nail amakhambi Ukwelashwa Folk kuveza imiphumela emihle kakhulu nge indlela eqotho kanye nokusetshenziswa esihleliwe izimali. Ngokwesibonelo, i-ejenti ezengeziwe kungaba okugeza usawoti ne ukwengeza i-iodine noma ijusi celandine. Phakathi ukwelashwa, kwesikhumba izinyawo kufanele kube esomile, kusukela ngokweqile umswakama letsintsa ukusabalala ukutheleleka (ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe izindawo phakathi iminwe).